Madame Tussauds Berlin: kpochapu ụda, mee America ka ọ dị ukwuu ọzọ
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Madame Tussauds Berlin: kpochapu ụda, mee America ka ọ dị ukwuu ọzọ
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche • Mmanya & mmuo
Madame Tussauds Berlin Wax Museum tinye ọnụọgụ nke Onye isi ala US ugbu a Donald Trump na ebe a na-ekpofu ahịhịa n'ihu ntuli aka onye isi ala US.
Tupu nke a, ọnụ ọgụgụ Trump na-eguzo n'ụlọ ezumezu ahụ n'akụkụ ọnụ ọgụgụ ndị isi America ndị ọzọ - Ronald Reagan na Barack Obama.
Onu ogugu nke Trump na-eguzo ugbu a na mkpofu ahịhịa. E nwere ihe atụ “akpa mkpofu” gburugburu ya.
Edere "Dump Trump, mee America ọzọ" na igbe ahụ.
Fọdụ ọkọlọtọ nwekwara okwu ndị a “Akara gị” na “Akụkọ Adịgboroja” na ha.
“Omume taa nwere agwa atụ metụtara ntuli aka na US. Anyị, Madame Tussauds Berlin, kpebirilarị iwepu ọnụọgụ nke Trump, "ka ọnụ na-ekwuchitere ụlọ ngosi ihe nka kwuru.